उद्योगमन्त्रीमा सुजाता कोइराला की उमेश श्रेष्ठ ? Nepalpatra उद्योगमन्त्रीमा सुजाता कोइराला की उमेश श्रेष्ठ ?
उद्योगमन्त्रीमा सुजाता कोइराला की उमेश श्रेष्ठ ?
उद्योगमन्त्रीमा सुजाता कोइराला र उमेश श्रेष्ठको चर्चा
काठमाडौं । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका जेठान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मन्त्री हमालको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका मन्त्री हमालले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले हमालको नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा गर्न अनुरोध गरेको र सोही अनुरोध स्वीकार गर्दै हमालले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
हमालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै अब उक्त मन्त्रालयको जिम्मा कसले पाउँछ ? भनेर चर्चा-परिचर्चा शुरु भएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग मन्त्रालयमा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राज्यमन्त्रीको रुपमा रहेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पठाउने तयारी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय रामचन्द्र पौडेलले समूहले मन्त्री बनाउने भनेर चर्चा रहेकी तर मन्त्री नबनाइएकी नेतृ सुजाता कोइरालाको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । सुजाताले पौडेल र शशांक कोइरालाको गुट छोडेको घोषणा गरिसकेकी छिन् ।
कांग्रेसकी नेतृ सुजाताले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको साथ छोडेको घोषणा गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकै दिन सुजाताले पौडेल र कोइरालाले कांग्रेस चलाउन नसक्ने बताएकी थिइन् ।यसअघि पनि सुजाता कोइरालाले पनि मन्त्रीमा दाबी गरेपछि पौडेल पक्ष अप्ठेरोमा परेको थियो ।
आफूलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी नगराउने कुरा ३ महिना पहिले नै थाहा भएको भन्दै सुजाताले कांग्रेसभित्र धोकाको राजनीति गर्नेले पार्टी चलाउन नसक्ने बताइन् । अब कसलाई साथ दिने त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले पार्टीभित्र सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएकी थिइन् ।
यद्धपी उनले आफू सभापति देउवाको पक्षमा उभिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिसकेकी छैनन् । तर आगामी १४औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर देउवाले सुजातासँग समीकरण बनाउन सक्ने अनुमान भने भएको छ ।
उता पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठले राम्रो काम गरेको भनेर कांग्रेसकै केही नेताहरु भने श्रेष्ठलाई उद्योगमन्त्री बनाउनुपर्नेमा लविङ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कसलाई मन्त्री बनाउँछन् ? त्यो हेर्न त बाँकी छ । तर देउवाले सुजाता र उमेशमध्ये एकलाई नै मन्त्री बनाउन सक्ने कांग्रेसनिकट स्रोतको दाबी छ ।
आफ्नो नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेपछि पदभन्दा व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति भएकाले यस्तो आशङ्काकै बीच मन्त्री पदमा बसिरहन उपयुक्त नलागेको भन्दै मन्त्री हमालले पदबाट राजीनामा दिएको जनाएका छन् ।